Guardiola Oo Madaxa Ka Qabsaday Dhaawacyo Haleelay Robben Iyo Ribery
HomeWararka MaantaGuardiola Oo Madaxa Ka Qabsaday Dhaawacyo Haleelay Robben Iyo Ribery
Tababaraha kooxda Bayern Munich, Pep Guardiola ayaa qiray in aanu beddeli karin labada ciyaartoy ee Frank Ribery iyo Arjen Robben oo aanu heli karin ciyaartooyo tayadooda oo kale leh, kadib markii labadan laacib laga reebay kooxdaas kulanka Sabtida ay la ciyaari doonto Wender Bremen.
Labadan xiddig ayaa waxa ay soo gaadhay dhaawacyo fudud kulankii ay Bayern Munich ku derdertay Shakhtar ee ay ku garaacday 7-0, iyadoo Ribery laga daweynayo dhaawac jilibka ah oo aan la ogeyn inta uu qaadan doono, halka Robben uu ka cabanayo neerfeyaal xanuunaya.
Guardiola ayaa waxa uu rajeynayaa in kooxdiisa oo lagu naanayso Bavarians in ay ciyaar wanaagsan soo bandhigi doonaan iyadoo ay dhaawac kaga maqan yihiin labadan ciyaartoy.
Macallinkan khabiirka ahi waxa uu xusay in kooxdiisu ay lumisay tayadii baasaska ee one-to-one, laakiin ay isku deyi doonaan in ay ciyaartooda hagaajiyaan.
Robben ayaa waxa uu ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsan Bayern Munich xili-ciyaareedkan isaga oo u dhaliyey 17 gool 21 ciyaarood oo horyaalka ah oo uu saftay, halka Ribery uu marar badan dhaawac kaga maqnaa kooxdiisa, waxaanu u saftay sagaal ciyaarood oo kaliya isagoo int badan u jiifay dhaawacii uu ku seegay Koobkii Adduunka.
Bayern Muncih waxa kale oo ka maqnaan doona Xabi Alonso oo ganaaxan, Thiago Alcantara iyo Javi Martines oo muddo badan dhaawac ku maqnaa.
Ciyaarihii Olombikada oo la soo gabagabeeyay + Waxyaabaha Lagu Xasuusan Doono
22/08/2016 Abdiwahab Ahmed
Chelsea vs Atletico Madrid 1-1 – HD All Goals & Highlights -Champions League
Aguero Oo Guul U Horseeday Man City